UNICEF Somalia - Media centre - UNICEF iyo Save the Children oo ku baaqey in la qaado tallaabo lagu caawinayo carruurta ay saameysey dhibaatadii ka dhalatey degsiimooyinkii barokacayaasha badan laga kiciyey ee Muqdisho
MUQDISHO, 11 Jannaayo 2018 – Burburintii kediska ahayd ee dhowaan lagu sameeyey dhowr degsiimo aan rasmi ahayn oo ku yaalley daafaha Muqdisho, taas oo ay la socotey in si khasab ah looga kiciyey qoysaskii halkaa degganaa, ayaa saameyn aad u badan ku yeelatey carruurta, UNICEF iyo Save the Children ayaa sidaa sheegey maanta.
In ka badan 4000 qoys ayaa halkaa ku waayey wixii ay haysteen waxaana qaar badan ay maciishadahoodii ku waayeen intii ay socdeen falalkii 29kii iyo 30kii Disembar lagaga kicinayey dadkii degganaa 21 degsiimo oo ku yaalley Km13, degmada Kaxda. Dadkaa badidoodu waxaa ay ahaayeen haween iyo carruur oo halkaas soo degey bilo ka hor, kuwaas oo badanaa ka soo safrey meelo fogfog iyaga oo ka soo cararey abaar iyo colaad. Dadkaas ayaa halkaa laga kiciyey iyada oo aaney jirin wax wadatashi ah oo ka horreeyey. Codsiyo ay bulshada halkaa degganaa ku codsadeen in la siiyo waqti ay ku qaataan alaabtooda oo ay si amaan ah halkaa ugu banneeyaan ayaan dheg jalaq loo siin.
UNICEF iyo Save the Children waxaa ay maamullada ugu baaqayaan in ay hubiyaan in dhammaan carruurta ay dhibaatadu saameysey si buuxda loo taageero iyo in iyaga iyo qoysaskooda loo guuriyo degaanno amaan ah; iyo in laga hortago in iyada oo aan la sii ogeysiin xerooyinka barokacayaasha laga kiciyo dadka deggan.